Mgbe onye MP4 video faịlụ na-ewe nke ukwuu ohere na draịvụ ike gị ma ọ bụ adịghị dabara na kaadị ebe nchekwa gị obere ngwaọrụ, ị kwesịrị ime ka MP4 nta. Na mgbakwunye na nke ahụ, ị ​​na-mkpa na-eme ka MP4 nta mgbe ị na-akwadebe ha maka web bulite, ebe ọtụtụ online video nkekọrịta saịtị amachi video size ị bulite.
A nkuzi na-akọwa otú e si mee MP4 nta. Na Wondershare Video Ntụgharị (Video Ntụgharị maka Mac) - zuru okè video mkpakọ software maka compressing dijitalụ video faịlụ ma ọ bụ DVD, ị nwere ike mfe ime ka gị na MP4 video nta enweghị ihe ọ bụla ịrịba ọnwụ nke àgwà. Ọzọkwa, a na omume na-enye dịgasị iche iche nke presets n'ihi na ọtụtụ mobile ngwaọrụ na multimedia Player, otú ga-adịghị mkpa a ruo n'ókè na video injinịa iji tọghata videos maka playback on iche iche na ngwaọrụ.
Olee otú ime ka MP4 faịlụ Nta?
1 Tinye lekwasịrị video faịlụ
Tupu anyị amalite download na wụnye Wondershare Video Ntụgharị. Wee pịa "Tinye Files" button na isi interface. Họrọ videos ị chọrọ iji belata size na Add File dialog igbe na pịa "Open" mbubata. I nwekwara ike ozugbo ịdọrọ na dobe lekwasịrị video faịlụ ka usoro ihe omume.
2 Kọwaa video ntọala
Pịa "Ntọala" button na ala nri akuku nke isi window. Họrọ video codec, eg H.264, site Video format ndepụta, ma ọ bụ nọrọ na ndabara codec. Mgbe ahụ ịgbanwe ọzọ mmepụta kwa ka mkpebi, bit ọnụego na etiti ọnụego site na ịpị akụ n'akụkụ kọlụm ịhọrọ site na ndọpụta ndepụta.
I nwekwara ike na-akpaghị aka mee ka gị na MP4 nta. Iji mee nke a, họrọ "Obere Size" nhọrọ, na see "OK" bọtịnụ. Mgbe ahụ, ị ​​ga-laghachi isi window. Ị nwere ike na-achọpụta na size nke MP4 e belata.
Mgbe ahụ, ị ​​ga-alaghachi bụ isi window na-achọpụta na e mere atụmatụ file size nke mmepụta faịlụ a ukwuu belata jiri ya tụnyere ihe mbụ otu. Ugbu a, i nwere ike pịa Play icon ka ịhụchalụ mmepụta video N'ihi.
NDỤMỌDỤ: I nwekwara ike belata file size site n'ịtụgharị ndị ọzọ usoro. Iji mee nke a, pịa format oyiyi na n'akụkụ aka nri nke isi window. Mgbe ahụ mmepụta window ga-gbapụta. Ebe a ị nwere ike họrọ ọzọ formats dị ka ọchịchọ gị. Ọ bụrụ na ị na-egwu mmepụta faịlụ na mobile ngwaọrụ, na-"Ngwaọrụ" taabụ ka ịhọrọ kpọmkwem ngwaọrụ.
Wee pịa Chọgharịa bọtịnụ nke mmepụta nchekwa na ala nke usoro ihe omume ezipụta na mmepụta ebe. See "tọghata" button na ala nri akuku nke usoro ihe omume window na-amalite video akakabarede usoro. Mgbe ọtụtụ sekọnd, ị ga-esi ọhụrụ faịlụ nke dị obere karịa mbụ otu.
Olee otú iji tọghata An iPhone Video ka MP4?
AVI vs MP4, ọdịiche dị n'etiti AVI na MP4
Olee otú Download Facebook Video ka MP4 na High Quality?
Olee otú iji tọghata FLAC ka MP4 na Windows na Mac
> Resource> MP4> Olee otú Mee MP4 Nta